बेलडाँगी शरणार्थी शिविर भित्र खेल मैदानको उद्घाटन | रेडियो झापा 100.7 MHz.
बेलडाँगी शरणार्थी शिविर भित्र खेल मैदानको उद्घाटन
रेडियो झापा 100.7 MHz. शुक्रबार, मंसिर १९, २०७७ ६:२२:०३
झापाको दमक ३ मा रहेको भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगीमा खेल मैदानको उद्घाटन गरिएको छ । खेल मैदानको अभाबका कारण शिविर भित्रका फुट्बल खेलाडीहरु लामो समय देखि खेल खेल्नबाट बञ्चित रहेका थिए । आज एक कार्यक्रमकाबिच झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले सो खेल मैदानको उद्घाटन गर्नु भएको हो ।
खेल मैदान उद्घाटन तथा नक आउट फ्टबल प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि पाण्डेले मैदान निर्माणले शिविर भित्रको खेल विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले “खेल खेलको रुपमा विकास हुन सकोस, झेलको रुपमा होईन” भन्दै प्रतियोगिताको सफलताको कामना समेत गर्नु भयो । त्यस्तै विशिष्ट अतिथि शिविर प्रमुख सुरेन्द्र राज दाहालले शिविर भित्रको खाली जमीनलाई खेल मैदानको रुपमा निर्माण गरिसँगै शिविर भित्रको खेल मैदानको अभाव समाप्त भएको बताउनु भयो ।
शिविर सचिब कृष्ण बहादुर लिङ्गदेनले खेल मैदान निर्माणमा शिविरका युवाहरुको ठूलो योगदान रहेको भन्दै मैदान निर्माण विदेशमा रहनु भएका खेल प्रेमीहरुको सहयोगले सफल भएको उल्लेख गर्नु भयो । खेल मैदान निर्माणमा सहयोग गरेको इन्टरनेशनल होम केयर एलएलसीका राम बाँनियाले शिविरभित्रको सहयोग अन्य क्षेत्रमा पनि रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रथम र द्धितीय उपाधी आँफूहरुको तर्फबाट उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा शसस्त्र प्रहरी बल बेलडाँगीका प्रमुख सियाराम चौधरी, नेपाल रेफ्री संघका केन्दीय सदस्य तथा झापा जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप बस्नेत, पथरी शिविर सचिब चम्पासिंह राई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा बेलडाँगी शिविरको सेक्टर डि ए ले विजयी शुरुवात गरेको छ । उसले सिवाईसी पथरी ए लाई ४–२ ले पराजित गरेको हो । निर्धारीत समय सम्म २–२ गोलको बराबरी भएपछि भएको टाइब्रेकरमा सेक्टर डि ले बाजी मारेको हो ।
खेलको म्यान अफ दि म्याच विजयी टिमका जर्सी नम्बर ११ का अञ्जन गुरुङ्ग घोषित भए । त्यस्तै दोश्रो खेलमा सेक्टर ए को टिम ए ले सेक्टर डि को टिम बी लाई एक शुन्यले पराजित गर्यो । उसको जितमा जर्सी नम्बर ६ का मनोज शेर्पा नायक बने । म्यान अफ दि म्याच समेत घोषित उनले दोश्रो हाफको १० औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । भोलि पनि दुई खेल हुनेछन् । भोलि हुने पहिलो खेलमा सेक्टर सी को टिम बी र सेक्टर बी को टिम बी तथा दोश्रो खेलमा सेक्टर बी को टिम ए र वाईएफसी टिम सी पथरी आमने सामने हुने टिकाराम कालिकोटेले जानकारी दिनु भयो । प्रतियोगिताको आयोजना भुट्नीज युथ क्लब बेलडाँगीले गरेको हो । प्रतियोगितामा बेलडाँगी र शनिश्चरे शिविर भित्रका १२ टिमको सहभागिता रहेको छ । प्रतियोगिताको विजेताले नगद २० हजार र उप–विजेताले १५ सँगै ट्रफी हात पार्ने छन् । फाईनल खेल २४ गते हुनेछ ।
‘अध्यक्ष कप क्रिकेट टुर्नामेन्ट’ ः लक्ष्मिनिया युवा क्लब फाईनलमा प्रवेश
जिवन गिरीको टिमले स्ट्रन लिफ्टिङ च्यम्पियनसीपमा भारतमा जित्यो २१ स्वर्ण
कमलमा पालिकास्तरीय भलिबल खेल प्रतियोगिता हुने
प्रदेश प्रमुखद्वारा खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन्
संकटालाई हराउँदै पंजाव पुलिस फाइनलमा